Abanye Abakhiqizi Nabahlinzeki Bempahla - I-China Others Factory
Indwangu Ekabili Yokumelana Nezimpumputhe Zeselula engu-20mm
Indwangu ye-honeycomb blinds iwuhlobo olusha lwezinto zokwakha zokuhlobisa iwindi lokuvikelwa kwemvelo. Ukuma kwendwangu ye-Groeve honeycomb blinds ilula futhi isitayela sicebile, sivumela abasebenzisi ukuthi bakhethe ngokukhululekile ngokuvumelana nezidingo zesikhala kanye nomkhathi, okwenza izinkulumo ezicebile zendawo zekhaya. Umklamo wekhekheba lezinyosi ungagcina umoya ongqimbeni olungenalutho, ukhiqize ukushisa okungaguquki kwangaphakathi, ufinyelele umphumela wokushisa ukushisa nokonga amandla, ungahlunga imisebe ye-ultraviolet elangeni, uvikele ngokuphumelelayo ifenisha ebalulekile namakhaphethi, njll.
Sinikeza amasampula wamahhala futhi atholakalayo ukuze uhlole ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
Ukwakhiwa: I-polyester ne-PVC
Ububanzi obuqediwe: 200/250/300 cm
Isisindo nge-m2Umthamo: 280g/m2±5%
Ukushesha kombala: ≥4 Ibanga
Ubude bokugoqa: 50m
Njengamanje, indwangu ye-acrylic njengendwangu yangaphandle ye-sunshade idume kakhulu emakethe iwuhlobo oluyisivivinyo lwe-Italian Para Company, kanye nohlobo lwe-masacril lwe-American Sunbrella Company. Ngokuyinhloko basebenzisa ubuchwepheshe be-tefulon obuthuthuke kakhulu ekwelapheni, futhi bengeza i-ejenti ye-antistatic ekwelashweni kwenqubo, okungaqinisekisa impilo yesevisi yakamuva yendwangu kanye nokuvumelana nezimo ezindaweni ezihlukahlukene. Imibala emihle nazo zonke izinhlobo zamaphethini, indwangu ye-acrylic edayiwe yekhwalithi ephezulu engu-100% esetshenziswa ngaphandle ...
Indwangu Yezimpumputhe Zezimboni ZaseShayina Ezimile Ngenani Lokuncintisana
Indwangu eyimpumputhe eqondile ibizwa ngokuthi ngenxa yokuthi ama-blades amiswe ngokuqondile kumzila ophezulu wesitimela, futhi angafiphazwa ngokukhululekile kwesokunxele nakwesokudla ukuze kuzuzwe inhloso yokuthungatha. Imigqa enhle, enhle futhi ekhanyayo. Icocekile futhi imfushane. Izimpumputhe eziqondile ezinenjini zamukela isakhiwo esishwibekayo, futhi amashidi endwangu aqondile angazungeziswa ngamadigri ayi-180. Injini ingasetshenziswa ukufeza ukufiphala nokuhoxiswa kwezimpumputhe ngokusebenzisa indlela yokudlulisa ngomshini. Ingakwazi ukulungisa ukukhanya kwangaphakathi ngokuthanda, i-ventilate futhi ifinyelele inhloso ye-shading.
Izimpumputhe Eziqinile Eziqondile Indwangu I-Semi-blackout 100% I-Polyester
Indwangu eyimpumputhe eqondile ibizwa ngokuthi ngenxa yokuthi ama-blades amiswe ngokuqondile kumzila ophezulu wesitimela, futhi angafiphazwa ngokukhululekile kwesokunxele nakwesokudla ukuze kuzuzwe inhloso yokuthungatha. Imigqa enhle, enhle futhi ekhanyayo. Icocekile futhi imfushane, indwangu yama-blind blinds inemisebenzi yokuvala umsindo, ukuvikela ukushisa, umswakama nokuvikela i-ultraviolet. Ukuhlanza kulula futhi akupheli. Imvelo yasendlini ihlelwe ngokuvumelana. Uma indwangu yama-blind blinds ivaliwe ukuze kuvinjwe ukukhanya kwelanga, i-engeli ingalungiswa ukuze ujabulele indawo yangaphandle, ehlanganisa ubuhle nokusebenza. Ziningi izitayela amakhasimende angazikhetha.Ilungele izindawo zomphakathi njengamagumbi enkomfa, amagumbi e-VIP, amahhovisi, izibhedlela, njll.
Indwangu Yekhwalithi Ephakeme Yezimpumputhe Ezimile 100% I-Polyester Yekhaya Elihlakaniphile
Indwangu eyimpumputhe eqondile ibizwa ngokuthi ngoba izindwani zimiswe zibheke phezulu kumzila wesitimela. Izimpumputhe eziqondile ezinenjini zamukela isakhiwo esishwibekayo, futhi amashidi endwangu aqondile angazungeziswa ngamadigri ayi-180. Injini ingasetshenziswa ukufeza ukufiphala nokuhoxiswa kwezimpumputhe ngokusebenzisa indlela yokudlulisa ngomshini. Ingakwazi ukulungisa ukukhanya kwangaphakathi ngokuthanda, i-ventilate futhi ifinyelele inhloso ye-shading. Ikhethini eliqondile likagesi lihlanganisa ukusebenza, umuzwa wezikhathi kanye nomuzwa wobuciko kokukodwa, ngenxa yokufudumala kwayo, ubuhle nokuphana, sekube yisinqumo sokuqala sezakhiwo zamahhovisi, izinhlangano zikahulumeni nezindawo zomphakathi.
Indwangu Emile Enemibala Eminingi 100% I-Polyester Enobubanzi obungu-89mm
Indwangu eyimpumputhe eqondile ibizwa ngokuthi ngenxa yokuthi ama-blades amiswe ngokuqondile kumzila ophezulu wesitimela, futhi angafiphazwa ngokukhululekile kwesokunxele nakwesokudla ukuze kuzuzwe inhloso yokuthungatha. Ukugcinwa okujwayelekile nokuhlanza kwendwangu yamakhethini aqondile kungenziwa ngezindlela ezilandelayo: Ukudonsa izimpumputhe njalo kunganciphisa ukuqoqwa kothuli nesikali. Ekunakekeleni okuvamile kwamakhethini aqondile, ungasebenzisa ibhulashi eliguquguqukayo noma i-feather duster ukuze ususe uthuli. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa i-vacuum cleaner ukuze uhlanze, umphumela uzoba ngcono.
Indwangu Eyimpumputhe Emile Yesitayela Esisha engu-100% I-Polyester Enobubanzi obungu-127mm
Indwangu eyimpumputhe eqondile ibizwa ngokuthi ngenxa yokuthi ama-blades amiswe ngokuqondile kumzila ophezulu wesitimela, futhi angafiphazwa ngokukhululekile kwesokunxele nakwesokudla ukuze kuzuzwe inhloso yokuthungatha. Izinga lendwangu eyimpumputhe eqondile izoba nomthelela omkhulu ekusetshenzisweni kwesikhathi esizayo, ngakho-ke lapho uthenga ikhethini eliqondile, kufanele sinake ikhwalithi yendwangu yamakhethini aqondile. Nawa amanye amathiphu okuthenga indwangu yama-blind blinds:
1.Uma umkhiqizo wekhethini othengiwe mpo ukhipha iphunga elimnandi, kusho ukuthi kunezinsalela ze-formaldehyde ekhethini eliqondile futhi akunconywa ukuthenga;
2.Ngemva kokukhetha umbala wekhethini eliqondile, kunconywa ukusebenzisa ikhethini eliqondile elinombala okhanyayo ukuze kusetshenziswe isikhathi eside nokuvikelwa kwemvelo. Amakhethini aqondile anombala okhanyayo angaba ne-formaldehyde ephansi kakhulu kanye nengozi yokushesha kombala kunamakhethini aqondile anombala omnyama.
Isiqinisekiso Sekhwalithi Indwangu Emile Emile 100% I-Polyester Semi-Blackout
1.Umbala wekhethini eliqondile kufanele uhambisane nombala wekamelo lonke. Uma ifenisha imnyama ngesitayela, khona-ke ikhethini eliqondile kufanele lisebenzise imikhiqizo ethile enombala okhanyayo, ngaphandle kwalokho imibala emnyama kakhulu izokwenza abantu bazizwe becindezelekile.
I-2.Isitayela sendwangu yama-blind blinds silula, sifanelekile kwezinye izitayela zokuhlobisa zesimanje, ezilula noma zaseMelika. Ifaneleka kakhulu ukufakwa kwesikhala ngamafasitela asuka phansi kuya ophahleni.
Indwangu Elula Nobuhle Bezimpumputhe Eziqondile Isemi-blackout Yehhovisi
Indwangu eyimpumputhe eqondile ibizwa ngokuthi ngenxa yokuthi ama-blades amiswe ngokuqondile kumzila ophezulu wesitimela, futhi angafiphazwa ngokukhululekile kwesokunxele nakwesokudla ukuze kuzuzwe inhloso yokuthungatha. Imigqa enhle, enhle futhi ekhanyayo. Icocekile futhi imfushane, indwangu yama-blind blinds inemisebenzi yokuvala umsindo, ukuvikela ukushisa, umswakama nokuvikela i-ultraviolet. Njalo ezinyangeni eziyisithupha, indwangu yama-blind blinds idinga ukwehliswa ukuze ihlanzwe futhi ilungiswe. Lapho uhlanza, ungasebenzisi i-bleach, dehydration and drying. Vumela indwangu eyimpumputhe eqondile yome ngokwemvelo, ngaphandle kwalokho ukuthungwa kwendwangu yezimpumputhe eziqondile kuzolimala.
Indwangu Eyonga Amandla Ye-Stripe Cellular Shades Yasekhaya
Indwangu ye-shades yeselula iwuhlobo olusha lwezinto zokwakha zokuhlobisa iwindi lokuvikelwa kwemvelo. Idizayini eyingqayizivele ivumela umoya ukuthi ugcinwe ongqimbeni olungenalutho, okugcina izinga lokushisa langaphakathi lingashintshi futhi konga izindleko zikagesi ku-air conditioner. Imisebenzi yayo ye-anti-ultraviolet kanye ne-thermal insulation ivikela ngokuphumelelayo izinto zasendlini, ukwelashwa kwe-anti-static, ukugeza kalula. Intambo ifihliwe ongqimbeni olungenalutho futhi inokubukeka okuphelele. Kulula futhi kusebenza kakhulu ukusebenzisa kunamakhethini endabuko.
Sinikeza amasampula mahhala kuwo wonke amakhasimende, ungabheka ikhwalithi bese ukhetha umbala ngokuqondile ngaphambi koku-oda. Ngaphezu kwalokho, izindwangu zethu zicebile ngombala futhi zilandela ukuthambekela kwemfashini yamazwe ngamazwe.
Indwangu Eyimpumputhe Engenantambo Phezulu Phansi Phansi Kuya Indwangu Eyimpumputhe Yekhekheba Lenyosi
Ikhekheba lezinyosi eliyimpumputhe lenziwa ngokwesakhiwo sekhekheba lezinyosi. Ngenxa yokuthi "ikhekheba lezinyosi" lakha ungqimba oluyingqayizivele lokuvimbela, umoya uhlala "ekhekhebeni lezinyosi", wengeze izinzuzo zokonga amandla ezingenakuqhathaniswa namanye amakhethini. Idizayini yesakhiwo esiyingqayizivele "yekhekheba lezinyosi" ye-honeycomb blinds igcina kahle ibhalansi yamazinga okushisa angaphakathi, ivala futhi igcine ifudumele, futhi idala umuzwa wokufudumala ebusika kanye nokupholile ehlobo. Izindwangu ezihlukene zokudlulisa ukukhanya, ukwakheka kwekhekheba lezinyosi, imibala, nezindlela zokusebenza kuletha ukukhetha okuhlukahlukene futhi kuphindwe kabili ukunethezeka kwekhaya.